२५ वर्षपछि भेटियो ‘तक्षक नाग, फोटोलाई छोएर “जय ” लेखी सेयर गर्नुहोस, मनले आटेको पुग्छ । – live 60media
२५ वर्षपछि भेटियो ‘तक्षक नाग, फोटोलाई छोएर “जय ” लेखी सेयर गर्नुहोस, मनले आटेको पुग्छ ।
२५ वर्षपछि दाङमा भेटियो ‘तक्षक नाग, फोटोलाई छोएर “जय ” लेखी सेयर गर्नुहोस, मनले आटेको पुग्छ ।
तक्षक नागले राजा परीक्षितलाई डसेर मारेपछि उनका छोरा जनमेजयले सर्प यज्ञ गरेर सर्प प्रजातिलाई नष्ट गर्न खोजे । सर्प प्रजातिको अस्तित्वरक्षाका लागि तक्षक नागले स्वर्गका राजा इन्द्रसँग अनुरोध गरेका कथा हिन्दु धार्मिक ग्रन्थमा पढ्न पाइन्छ । कथाहरूले नागलाई अलौकिक शक्तियुक्त र सर्पहरूको राजा बताउँछन् । हामीलाई देख्ता–सुन्दा अनौठो लाग्ने शक्ति के सर्पमा साँच्चै हुन्छ ?
यो सर्प एउटा रुखबाट अर्कोमा २७/२८ फिटसम्म उड्ने (ग्लाइड गर्ने) शाहले बताए । नेपालमा पाइने सर्पमध्ये उड्न सक्ने एक मात्र, अरूभन्दा सुन्दर देखिने, कम विषालु, कमै देखिनेलगायत अन्य विविध महत्त्व बोकेकाले हुलाक सेवा विभागले यसको चित्र अंकित टिकट पनि प्रकाशित गरेको छ । यसलाई केही समुदायले पूजासमेत गर्ने भएकाले यसको नाम तक्षक नाग राखिएको हुन सक्ने प्राध्यापक शाहले बताए । यो सर्प उड्ने बेलामा घाँटी चेप्टो बनाउने गर्छ ।हलुका हरियो, पहेँलो, कालो र रातोलगायत रङका टाटा हुने यो सर्पले अन्डा पार्छ । प्रायः दिउँसो सक्रिय हुने यो सर्प घना वन तथा ठूला रुखमा बस्न रुचाउने अध्ययनले देखाएको छ ।
← तपाइले सोचेको काम बन्नेछ, ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस् !!!!
मध्यभोटेकोसी आयोजनाका सीईओलाई २ करोड प्रस्ताव, गरेको अडियो सार्वजनिक →